प्रेसर हाई छ ? के खाने के नखाने ? यस्ता छन् जान्नैपर्ने कुरा - Sidha News
प्रेसर हाई छ ? के खाने के नखाने ? यस्ता छन् जान्नैपर्ने कुरा
काठमाडौं। समय फेरियो । अब खानै नपाउने अवस्थाका नेपाली कमै छन् । तर हाम्रो अस्वस्थय जीवनशैली, आनीबानी र अल्छीपनाले हामीमध्ये धेरैलाई गाँजेको छ । यस्तो आहारविहार भएपछि हामीसँग भएको धन दौलतले केहि पनि गर्दैन ।
हिजोआजका मानिसहरुलाई मीठामीठो खानुपर्ने, हप्ताको ४ दिन मासु खानैपर्ने, रक्सी खाने , सुर्तीजन्य तथा अन्य नशाको सेवन गर्नुपर्ने, विभिन्न खाले मानसिक तनावमा रहनुपर्ने बाध्यता, शारीरिक व्यायामको कमी आदिको कारणले गर्दा ब्लडप्रेसरको समस्या बढ्दै गएको छ । फलस्वरूप हार्ट अट्याक, प्रेसर हाई, प्यारालाइसिस मुटुरोग जस्ता समस्या देखिन थालेका छन् ।
हाम्रो यहि जीवनशैलीले निकालेको रोग हो, उच्चरक्तचाप अर्थात् ब्लडप्रेसर हाई । पहिले धनीमानी, उमेर भएका रोगले च्यापेकालाई छिटफूट देखिने यो रोग अहिले २० वर्षे ठिटाठिटीदेखि वयस्क, पुरुष मिलामा देखिन थालेको छ । सुन्दै डरलाग्दो यो तथ्य नेपालकै हो । हो, ३० वर्षका युवाले समेत प्रेसर हाई भएको समस्याले नियमित औषधि खानुपर्ने अवस्था छ । ब्लडप्रेसरका कारणमध्ये २ देखि ३ प्रतिशतको मात्रै कारण देखिएको छ । बाँकी ९७ प्रतिशतको कारण पत्ता नलागेको बताईन्छ । त्यसैले उच्च रक्तचापलाई साइलेन्ट किलर रोग हो ।